संस्थाभित्रका दलाल तह लगाउन सके एनआरएन आफैं सुध्रिन्छ :: Setopati
संस्थाभित्रका दलाल तह लगाउन सके एनआरएन आफैं सुध्रिन्छ
सन्तोष न्यौपाने , बेल्जियम
पीडकहरु नै मानवअधिकारको वकालत गर्ने भएपछि के हुन्छ ? जर्मनीको फ्राँकफर्टको छोटो युरोपेली कुम्भ मेलामा पनि जरो पहिल्याएर एनआरएन बनाउनेतिर कसैको ध्यान गएको पाइएन । दलालहरुले श्रमिकको वकालत गर्ने, काम लगाए बापत उचित पारिश्रमिक नदिने हरामहरुले उचित ज्यालाको कुरा गर्ने ? धत् हेर्दाहेर्दै भाउन्न भयो ।
नामै तोकेर भन्न सकिन्छ, एसेन्टा काण्डका प्रमुख शंकास्पद अर्जुन कुमार श्रेष्ठको बारेमा । किनभने, एनआरएन बेल्जियमले छानविन समिति गठन गरेर बकाइदा एकप्रति केन्द्रमा पठाएर उनको भूमिकाको गडबडीका सब रिपोर्ट पठाएको थियो । खै कहाँ गयो त्यो सब ? कि अर्जुनकुमारलाई स्वच्छ छवि भएको सावित गर, होइन भने उनलाई गलत प्रमाणित गर । एसेन्टामा आएर पोर्चुगल पुगेकाले हाकै भन्छन् रामकहानी । नाम खोतल्दै जानुपर्छ, युरोपका ठूलाबडा अरु काजीले पनि टन्न खाएर ल्याएका मानिसहरु भेटिने रहेछन् ।
एनआरएन पोर्चुगलका पदाधिकारीहरु स्वयम् श्रम शोषण गर्ने र मानव तस्करीको धन्दामा लागेका प्रमाणहरु यथेष्ट भेटिए । कार्यसमितिले राजीनामाको नाटक गरेर आफ्नाहरुलाई कारवाही हुनबाट जोगायो । कसले हो यसको छानविन गर्ने ? ख्वै जर्मन सम्मेलन बोलेको ? अनि एनआरएन बलियो कसरी हुन्छ ? कि सबै प्रवासी नेपालीको हक हित भन्ने नारा छोडेर नेपालबाट प्रवास बसेका धनाढ्यहरुको सँस्था भन्नुपर्यो, होइन भने आँखै अगाडिका यी सत्यहरु चिम्लिन मिल्छ र ?
अर्कोतर्फ चाखलाग्दो कुरा के भने एनआरएनले आफ्नो युरोप स्तरीय बैठकमा प्रत्येक पटक नेपालबाट ठूलो रकम खर्चेर राष्टिय स्तरमा काम गर्ने पत्रकारहरुलाई ल्याउने गरेको छ । त्यसरी आउने पत्रकार र तिनीहरुले काम गर्ने मेडियामा एनआरएनको गुणगान बाहेक अरु देख्न र पढ्न पाइँदैन । विरोधको एक शब्द पनि छैन । आफू निकट एनआरएन नेताको अन्तरवार्ता छाप्यो , समाचार लेख्यो । सिद्दियो । यताका पत्रकारहरु पनि गणेशजीले शिव पार्वती घुमेझैँ कार्यक्रमस्थलमै गएर आफ्नो वार्षिकोत्सव मनाइरहेछन् । गर्नेलाई भन्दा देख्नेलाई लाज । तपाइँहरुबाट एनआरएनको वास्तविक समाचारको कसरी अपेक्षा गर्नु महोदयहरु ? आलोचना त सकारात्मक काममो लागि पो गरिन्छ । हनुमानगिरी गरिरहुनपर्ने के नै छ र ?फेरि एनआरएनले सूचना उपलब्ध गराउन मेडिया फोरम गठन गरेकै छ । नेपालबाट त्यत्रो खर्चेर आएकाहरु कसको लगानीमा आएका हुन् ? तिनैले युरोपमा सम्वाददाता बनाएर राखेका पत्रकारहरु किन अयोग्य भएका हुन् ? यसको जवाफ कसैसँग पनि छैन होला । हुने भए यतिविधि हुने पनि थिएन ।
दलालहरु हावी हुँदासम्म यो सँस्था नवधनाढ्यहरुको क्लब हुनेछ । आफूभित्रका दलाल, मानवतस्कर, नैतिकहरामहरुलाई तह लगाउन सके एनआरएन आफै सुध्रिन्छ । विचित्र त मिडियाका साथीहरु समेत तिनकै पछि लागेर हरेराम गाइरहेका छन् । चर्चित वृत्तचित्त निर्माता र लेखक माइकल मूरले भने जस्तै पत्रकार त प्रतिपक्ष पो हो । उसले झिज्जिनेगरी आलोचना गर्छ । अनि बल्ल न मान्छे सही बाटोमा हिन्छ । मिडिया नै कमण्डलु बोकर पछि लागेपछि कसले यो यो सँस्था जोगाउने ?
प्रकाशित मिति: आइतबार, साउन १५, २०७४, २१:२७:११